सबै भन्दा राम्रो देशको विवाह होटल
ROSSOTTREBNANDODODORS आवश्यकताहरूको साथ अनुपालन
पार्क होटल "Orlovsky"
कुटेज होटेल "स्टेफनोवो"
ईस्पेड्रेभेभि "बॉबन यार्ड"
हामीले गर्मीको मौसम खोल्यौं! हतार! पहिले नै आउटडोर पोखरी चलिरहेको छ!
<< p> के तपाइँ साथीहरूको ठूलो कम्पनीमा नयाँ वर्षको पार्टीको व्यवस्था गर्न चाहानुहुन्छ? वा नातेदार तालिकामा आफन्त र प्रियजनहरूलाई स collect ्कलन गर्नुहोस्? वा हुनसक्छ नयाँ साल एक नयाँ वर्षको साँघका साथ, मौनता, मैन, हल्लाको भोज बिना? धेरै नजिकैको नजिकका धेरै नजिककाहरू आवासहरू र मनोरन्जन केन्द्रहरूले सबै आदरणीय साथ आरामदायी घरहरूमा आफ्ना पाहुनाहरूलाई आवासहरू प्रदान गर्दछ। छनौट गर्नुहोस्!
• होटल पाहुनाहरू सामाजिक दूरीसँग पालना गर्नुपर्दछ। • व्यक्तिगत संरक्षण उत्पादनहरू प्रदान गरिन्छ (2 28 देखि 1। 1) पाहुनाहरूको प्रमाणपत्र हुनुपर्दछ (वा एन्टिबडीहरू)।
लेनिन्स्की शहर जिल्ला, बोगडान्हा गाउँ, ओरिदान गाउँ, +7 (45 557) 620-97-922। En: मानक कुटीरा दुईको लागि 11 115,000 रूबलहरू (डिसेम्बर 300 देखि जनवरी2सम्म)। Ait:
<< p> नयाँ वर्षको लागि, तपाईं दुई वा दुई थप स्थानहरूमा समाहित हुने सम्भावनाको साथ दुई वा सुइटको कुटीर भाँडामा राख्न सक्नुहुन्छ। सबै कुटीहरू लुड्युना तालको किनारमा अवस्थित छन् र तपाईलाई चाहिने सबै चीजको साथ अवस्थित छन्: फ्रिज (मिनी बार), क्रोड टिभी, शावर, वाइ -्फन, वाइ-फाई।
मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मनोरञ्जनबाट एक टूबिल ट्र्याक, रि inking ्ग्रेस, एक ब्यान्ड्रोमवास पोखरी, हम्ममा सौना, हम्ममा गुलाब, जिम्मा गुड, जिम र अधिक ।
यस वर्ष, नयाँ वर्षको उत्सवको लागि, डिसेम्बर 300, प्रस्थानको लागि पार्क होटल ओरियस्कीमा आइपुगेको मिति - प्रस्थान - जनवरी 2।
ठेगाना: Dekrovesvsky शहर जिल्ला, याखुरो शहर, km 43 किलोमिटर मस्को रिंग रोडबाट। आउटस्टिटाइलहरू: + + + (45)) 266-600-48। Yena: दुईको लागि कुटीर - 58 58,000 रूबल (डिसेम्बर 311 देखि जनवरी) सम्म)। Ait:
कलरहरू यहाँ सुसज्जित छन् - डिशवरासबाट तातो फ्लोरहरूसम्म। तीन बेडरूमहरू, तीन बाथरूमहरू, र पोर्चमा आफ्नै ब्राइम पनि। प्रत्येक घर दुई कार को लागी एक गार्ड पार्किंग छ। साइटमा कुल साइट र एक प्लेट हो। प्रत्येकको फिनिश सौना, र चेलेटमा - एउटा सानो पूल छ।
यो स्कीइंग र स्नोबोर्डका प्रेमीहरूको लागि एक महान विकल्प हो। नजिकैको युखरोमा, "VINTNE" र "स्टेपाननोव" को स्की रिसोर्टहरू हुन्।
होटल जटिलसँग विभिन्न कोटीहरूको कोठा र कुटपिट गरीएको छ र 40000 प्रकारका लागि
नि: शुल्क ट्र्याकहरू
<< p> यस चयनमा, मस्को क्षेत्रका सब भन्दा असामान्य होटलहरू बच्चाहरूको साथ वा दम्पतीको लागि सप्ताहन्तमा आराम गर्न उपयुक्त छन्। देश ECO-होटल विभिन्न वास्तु फार्महरू द्वारा छुट्याइएको छ र कोठाको अवरोधमा असामान्य डिजाइन समाधान समाधान हो। तपाईको स्मृतिमा मात्र चमकदार प्रभावहरू छैनन्, तर सुरम्य प्रकृतिको पृष्ठभूमि विरुद्ध उल्लेखनीय फोटोहरू।
होटल आरक्षण प्रणालीहरूको समीक्षा र रेटिंगको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय ग्राउन्ड क्षेत्र मध्ये एक हो। तलका लिंकहरूको अनुसार, तपाईं 2021 मा ठाउँहरू र मूल्यहरूको उपलब्धता स्पष्ट रूपमा स्पष्ट पार्नुहोस्।
<< p>2रेस्टुरेन्टहरू "केटल", "बुफे" (स्विडेटिश लाइन), एक बार "जहाज" र बार्बेक्यु गाजबस। बच्चाहरूको लागि, त्यहाँ एक मनोरञ्जन पार्क, बच्चाको खेल मैदान, बच्चाको एनिमेसन र क्लब। पाहुनाहरूले एक रूसी स्नान भाडामा लिन सक्छन्। फुटकर वरपरहरू ताजा हावामा हिंड्नुपर्दछ।
मूल्य 36 3600 रूबलहरू /
<< p> यसले खाना र पेय पदार्थ कोठा सेवा प्रदान गर्दछ, 2-घण्टा फ्रन्ट डेस्क र नि: शुल्क वाइफाइ। निजी पार्किंग एक अतिरिक्त लागतमा उपलब्ध छ।
दिन 1 <
को लागी >
असामान्य होटल ला फेरम डे फेरम डी सम्पादन गरिएको मस्कोली पार्कको किनारमा रहेको कोलकालोनाबाट226 किलोमिटर रहेको मस्को पार्कमा अवस्थित छ। ला फेरम डे आरवरी मा पाहुनाहरूको स्वागतका लागि मुख्य भवन 1 years औं शताब्दीको खोपडीको फ्रान्सेली ऐतिहासिक वास्तुकलाको उत्तम परम्परामा निर्माण गरिएको छ। ला fourme de raê मा मासुबाट उत्पन्न मासुबाट बनेको वर्तमान दुध र कुटीर भाँडो प्रदान गरिन्छ।
एक सौना र नुन गुफा छ। फोहोर लिंक गरिएको प्रक्रियाहरूको लागि, सिक ताल अपराधको प्रायद्वीपको स्टेक भागमा प्रयोग गरिन्छ। हाईकिंग र साइकलिंग, ताजा हावामा सवार घोडा सवार बच्चाहरूसँग आयोजना गरिन्छ, सम्पर्क चिडियाखानामा।
मूल्य 35 3500 रूबलहरू / दिन प्रति कोठा
आरामदायी इको होटल होबिटल्याण्ड मस्को क्षेत्रमा मोजाशिस्कमा अवस्थित छ। प्रत्येक घरको दाउरामा झाडी खाडलमा एक अल्छी भगारिएको छ, एक कट्टरपन्थी, एक कटौती, एक फ्राइंग प्यान, हिउँको सेतो शुन्यता र, धेरैजसो महत्त्वपूर्ण रूपमा - एक विशाल गोल विन्डो! नजिकैको कुञ्जी पानीको साथ वसन्त छ।
<< p> इलाकामा त्यहाँ एक छुट्टै बाथरूम, शौचालय, हाँसो ड्राईको लागि रोसेट हो। पाहुना पाहुनाहरूको लागि पार्किंग बन्द गरियो।
मस्को क्षेत्र मनोरञ्जनको एक उच्च सांद्रता द्वारा विशेषता हो। मस्कोको क्षेत्रमा छुट्टीको घरहरूमा प्रतिस्पर्धा भएकोले ती प्रत्येकको लागि महत्त्वपूर्ण छ जसले यसलाई अरूबाट भिन्न पार्छ। यस्तो देखिन्छ कि जैविक उत्सवको उत्सव पुलिस र स्टाफको शर्तले ग्राहकहरूको हृदयको लागि साँचो छनौट गर्न सफल भयो - यो एक स्थानको अवधारणा हो जसमा छुट्टीले सँधै शासन गर्दछ।
बृद्धि पार्कमा आगमनमा पाहुनाहरूले त्यस्ता विकल्पहरूबाट आवास छनौट गर्न सक्दछन्: होटल भवनमा कोठा, कुटपिट गर्ने वा भित्ता भाडामा लिइरहेका छन्। होटल कम्पनीमा पाँचवटा कोठा कोटीहरू समावेश छन्:
<< p> ती सबैको आवासको सूचीले आवश्यक फर्निचर, मिनी-बार, टेलिभिजन, टेलिभिजन, बाथरूम, शौकिक, टायर, तौलसहित समावेश गर्दछ।
पार्क होटेलमा "वन चाड" भनेको वन माझमा छायाँको भाँडामा अवस्थित आधुनिक कुष्ठरोज प्रकार भवनहरू हुन्। र उपनगरहरूमा प्रकृति एक सप्ताहन्त वा छुट्टी खर्च गर्न एक महान तरिका हुनेछ। निवासीहरू लामो समयसम्मको आवासका लागि पनि आवश्यक सबै चीजको साथ सुसज्जित छन्, जाडो मौसममा सहित। अतिरिक्त शुल्कमा, यसलाई पालतू कुटीरहरूमा बसोबास गर्न अनुमति दिइन्छ (उनीहरूको अनुभवी तौल र आयाम सीमित छन्)।
घरका केही आकारहरू प्रस्ताव गरिन्छ, धन्यबाद, धन्यबाद, पाहुनाहरूको संख्यामा इष्टतम छनौट गर्न सम्भव छ। भीडपालित कम्पनी एक भेलामा एक भित्ता मध्ये एक वित्तीय जंगल वा एलिट हेननेसी मा संयोजन गर्न सकिन्छ। पछिल्लो पाहुनाहरु मर्मत मा धेरै विशेषाधिकार प्रयोग गर्दछ।
जीवनको लागत छनौट ट्यारिफ योजनामा ​​निर्भर गर्दछ। अकेमुर्त, एनिमेसन, पार्किंग र सेवाका केही अन्य तत्वहरू कुनै पनि ट्यारिफमा समावेश छन्। To देखि 12 बर्षदेखि बच्चाहरूका लागि, त्यहाँ छुटहरू छन्
रेस्टुरेन्ट जटिल पार्क पार्कले होटल दैनिक खाना प्रदान गर्दछ, एक ला कार्टे सेवा र एक भोज मेनू। पूर्ण बोर्डको अर्थ तीन-शूडिश लाइन ", आधा बोर्ड - दुई पटक - दुई पटक। खाना बिना बुफेट खरीद गर्ने मामिलामा, तपाईं छुट्टै तिर्न सक्नुहुन्छ। कोठामा खाना र पेय पदार्थहरू आपूर्ति गर्न सम्भव छ।
<< p> एक मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक "वन चाड पार्क" विवाह टर्कीको संगठन हो। यो गर्नमा, 200 र2260 सीटका लागि दुई रेस्टुरेन्टहरू छन्, एक सुन्दर पासो, एक सुन्दर पासो, एक उच्च-वर्ग भान्छा, र मुख्य कुरा पेशेवरहरूको टोली हो। सबै सेवाहरू - आमन्त्रित कार्डबाट अन्तिम सलाम गर्न - तपाईं एकल प्याकेज अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य उत्सवहरू (बच्चाहरू र वयस्कहरूको जन्मदिनहरू, स्नातक चार्ज) मस्को क्षेत्रमा प्रकृतिमा उत्तम होटेलहरूमा पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
सहभागीहरूको संख्यामा व्यवसायका लागि व्यवसायका लागि। इन्टरकम र सम्मेलन कोठाको परिकल्पना गरिएको छ, कफी ब्रेक र बफेट ढाँचामा खाजाको संगठन। 20 व्यक्तिको समूहका लागि। त्यहाँ आवास र सम्मेलन सेवाहरूको ब्याच प्रस्ताव छ "सबै समावेशी"।
<< p> यदि तपाईंसँग रूसबाट उडान गर्न समय थिएन भने, तपाईं कम्तिमा मस्कोमा मस्कोमा छोड्नुहुनेछ। शंकुबाट सामरुर, गर्मी, एक स्नान र ताजा हावाको साथ हिंड्दछ - यस्तो मनोरञ्जन देश होटलहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। गाउँले बताउँछ कि कहाँ छ र कति र तपाइँले नयाँ वर्ष मनाउन सक्नुहुन्छ र मस्कोबाट टाढा नहुनुहोस्, मखला-सुस्त छैन। Acha "तपाइँ तिनीहरूलाई धेरै चिन्नुहुन्छ)।